Kachasị mma ASIC Broka February 2021 | Guo Mụọ 2 Trade Guide
Best ASIC Broka 2021 - Mụta ahia 2
E nwere ọtụtụ puku ndị na-ere ahịa na-enye ọrụ ego n'ụwa niile. Nsogbu ya bụ na ọ bụghị ha niile ziri ezi. O bu ihe nwute, enwere onodu ajuju nke ndi na ere ahia na ndi ozo, ya mere ime ihe omume ulo gi bu isi.
Obi dị m ụtọ n'ime afọ ole na ole gara aga ma ọ bụ karịa iwu gọọmentị mere ka o kwe omume ịhazi ndị na-achịkwa usoro. Ebumnuche nke ikike ndị a bụ ịhazi na ịchịkwa oghere ọrụ ego iji mepụta ọnọdụ ngosi mara mma ma nwekwuo nghọta maka mmadụ niile.
Na njem njem gị, ọ ga-abụrịrị na ị bịara ọtụtụ ndị na-ere ahịa na-ejide ikikere ASIC (Australian, Securities & Investments Commission). Akwụkwọ ikike a kachasịkarị na oghere ahịa Forex.
Na ibe a, anyị ga-ekpuchi ihe niile ịchọrọ ịma gbasara ndị na-ere ahịa ASIC. Nke a gụnyere ihe ASIC na-eme na usoro kachasị mkpa iji cheta tupu ịbanye na onye na-ere ahịa nke ụlọ ọrụ a nyere ikikere. Na mmechi, anyị ga-atụle ndị na-ere ahịa ASIC kacha mma ugbu a na-enye ndị ahịa azụmaahịa na 2021 ọrụ ha.
Gịnị bụ ASIC?
Bodytù a na-achịkwa aha anọwo kemgbe 1991, ọ bụ ezie na akpọburu ya ASC (Australian Securities Commission). Nnyocha nke Wallis malitere na 1996 na ebumnuche nke nyocha na imeziwanye ọnọdụ ego, yana nhazigharị omume ego na nkwụsi ike n'ozuzu ya.
Na July 1998, nke aha ọjọọ aha a jụrụ n'elu, ASC ghọrọ ASIC nke anyị maara taa. Nke a bụ oge mbụ ndị ahịa na-echebe, ụkpụrụ nkwụnye ego na mkpuchi bụ n'ezie emere n'okpuru microscope mgbe ọ bịara ezigbo mgbanwe na iwu.
Ọganihu ngwa ngwa na 2009 na mmezigharị na-aga n'ihu na-arụ ọrụ. Oge a ọ metụtara etu ndị na-ere ahịa ASIC nwere ike isi rụọ ọrụ n'ahịa ahịa Australia. Iwu ohuru siri ike batara dika nnwale yana ule siri ike na imeghari ihe ndekọ ego nke ụlọ ahịa na nlekọta ndị ahịa.
E webatara ụfọdụ mgbanwe ndị ọzọ amaara na ngalaba ego nke Australia, gụnyere MoneySmart (nke dochiri FIDO na Understandghọta Ego). MoneySmart bụ ọrụ n'efu na-enye ndị mmadụ ndụmọdụ, ozi na ngwa agụmakwụkwọ na akụrụngwa.
Ọzọkwa, e tinyere nke a ka ọ bụrụ akụkụ nke nnukwu foto - ichebe ndị na-etinye ego, ma na-enyere ha aka ịme nhọrọ ego ka mma n'ọdịnihu, si otú a na-abawanye uru.
Kedụ ka ndị na-ere ahịa si enweta ikike si ASIC?
Azịza ya - ọ bụghị ịdị mfe. ASIC na-arụ ọrụ site na iji iwu siri ike, dị ka FCA na CySEC. Iji malite, ndị na-ere ahịa niile kwesịrị itinye akwụkwọ maka ikikere ziri ezi sitere na AFS (Australian Financial Securities), mgbe ahụ ASIC ga-enyocha ngwa ahụ.
All ASIC brokas kwesịrị ichere maka nnabata tupu ha enwee ike ịnye ọrụ ego. Mgbe nke ahụ gasị, onye na-ere ahịa ga-agbaso ọnọdụ ọ bụla nke ikike ikikere AFS dị ka 'Actlọ Ọrụ Iwu 2001'.
Mgbe nke a gasịrị, AFS na ASIC na-enyocha ikike ụlọ ọrụ ọ bụla iji nye ọrụ ego. Nke a gụnyere inyocha akụnụba nke ikpo okwu, atụmatụ azụmaahịa ụlọ ọrụ na ọtụtụ usoro ndị ọzọ.
Anyị achịkọtara ndepụta ụfọdụ ọnọdụ chọrọ maka onye na-azụ ahịa ASIC iji nweta ikikere.
Nyefee Akwụkwọ Kwa Afọ
Nke a nwere ike iyi ihe doro anya, mana iji lekwasị anya na ndị na-ere ahịa ASIC, iwu chọrọ ka ụlọ ọrụ nyefee ahụ dị iche iche nkọwa zuru ezu na ahụ. Nakwa nke ntụgharị kwa afọ, nyocha ndị a ga-enwerịrị oke azụmaahịa zuru oke nke akụnụba ego, oke ego itinye ego na akaụntụ, yana ntụgharị nke akụ ndị otu.
Ọzọkwa, ha ga-enwerịrị ihe akaebe nke nyocha ego na nkọwa zuru ezu nke nkwụnye ego ejiri na akaụntụ. Na mgbakwunye, nyocha nyocha gụnyere azụmahịa niile emere na ndị ha mere. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, onye na-ere ahia ga-amata ọdịiche dị n'etiti iwu nke ndị ahịa nyere n'onwe ha, na nke ndị na-ere ahịa na-arụ.
ASIC nwere ihe karịrị iwu iji kwụọ ụlọ ọrụ ọ bụla na-ere ahịa ọ bụghị ịgbaso iwu ya na leta ma ọ bụ ozi efu nke nyocha ahụ achọrọ. Yabụ, dị ka onye na-azụ ahịa, ịkwesighi ichegbu onwe gị gbasara ndị na-ere ahịa ASIC enweghị aka ọrụ. Kasị mkpa, ASIC nwere dị nnọọ ụkpụrụ dị elu.
Na mba ọ bụla nke nwere ọrụ na-ahụ maka ịhazi mpaghara ego - nkewa ego bụ iwu chọrọ. Nchebe ndị ahịa ego a abụghị naanị ndị na-ere ahịa.
Isi ego, ndị na-ere ASIC niile nwere iwu iji debe ego akaụntụ gị na akaụntụ dị iche na nke ego ụlọ ọrụ ahụ. Nke a pụtara na ọ bụrụ na ụlọ ọrụ akụ na ụba ma ọ bụ bụrụ ndị e mebiri iwu na-akwadoghị, ego gị dị mma ma dị mma.
N'ikwu okwu n'ozuzu, onye na-ere ahịa nke atọ nwere nnwere onwe ga-ejide ego nkewa, onye ahụ ga-ahụ maka iweghachi gị ego ahụ.
Abịa na ịchekwa ego gị, a na-adụ ndị na-ere ahịa ASIC ọdụ ka ha na-esonye na ụlọ akụ 1 - (nke pụtara ụlọ akụ nwere nnukwu ọkwa). Ọzọkwa, ụlọ akụ - 1 akụ na-ejide ego na akaụntụ gị agaghị enwe njikọ ọ bụla na ndị na-ere ahịa, n'ọnọdụ ọ bụla.
Ngosipụta zuru ezu nke ndị ahịa
Ndị na-ere ahịa na iwu chọrọ iji nyere ndị ahịa aka ịme mkpebi dabere na nghọta, izi ezi, na ọkachamara zuru oke. Ahịa ahịa ego niile kwesịrị ịdị n'usoro ma kwanyere ugwu mgbe ị na-ere ọhaneze ngwaahịa.
Mgbe ụfọdụ a na-akpọ 'nkwupụta ihe egwu', onye ọka iwu ASIC chọrọ ka iwu kwupụta ụgwọ ọ bụla akwụ ụgwọ maka ụlọ ọrụ ahụ. Otu ihe atụ nke nke a ga-abụ nhazi ọrụ zuru ezu yana ụgwọ adịghị arụ ọrụ nke nwere ike ịdị ma ọ bụrụ na ịnweghị iji akaụntụ gị otu ọnwa.
N'elu nke a, ekwesịrị ịmara maka ụgwọ azụmahịa ọ bụla, gụnyere ego abalị na CFDs. Ọ bụghị ndị ahịa ASIC niile na-akwụ ụgwọ ọ bụla n'okpuru anyanwụ, mana agbanyeghị, onye na-eweta ya ga-enwerịrị nghọta zuru oke gbasara ụdị ọnụego ya.
Ga-ahụkarị na ịchọrọ ịgụ peeji metụtara nkwenye gị nke nghọta, oge ụfọdụ a na-akpọ ya 'ụdị nkwenye ndị ahịa'. Ogologo ya na nkenke ya bụ - site na iwu, onye na-ere ahịa ASIC kwesịrị igosipụta ụgwọ niile nwere ike ịdabara gị.
Mkpebi esemokwu esemokwu dị n'ime ụlọ bụ ihe ọzọ iwu chọrọ maka ndị na-ere ahịa ASIC. Dika odi otua abughi ihe ozo enyere aru site na aru.
Ọnụ ego zuru oke
Dịka ụkpụrụ ASIC, ndị na-ere ahịa ikike nwere ga-enwerịrị opekata mpe Dollar Australia na akaụntụ ụlọ akụ ahụ. Nke a kwesịrị ịbụ ikpe tupu ọ nwee ike ịnye ọhaneze ọrụ ego.
Australia AML / CTF Iwu
AML dị mkpụmkpụ maka 'Mgbochi Ego Mgbochi', ebe CFT na-anọchi anya 'Iguzogide Ego nke Iyi ọha egwu'. Nke a bụ usoro iwu chọrọ maka azụmaahịa ASIC ọ bụla. N'ụzọ bụ isi, ọrụ nke AML / CTF bụ ọrụ ịkwụsị itinye ego na iyi ọha egwu, ịchụ ego ego, wayo ego, izu ohi njirimara na ọtụtụ mpụ ndị ọzọ na-achọ ịmata ihe.
N'iburu nke a n'uche, ndị na-ere ahịa ASIC ga-eme usoro KYC - nke bụ okwu aha nke 'Mara Onye Ahịa Gị'. Na nkenke, nke a bụ ihe mere ị ga-eji nye ozi na akaebe nke onye ị bụ.
KYC gụnyere azụmaahịa na-enweta aha gị na adreesị ụlọ gị, foto ID n'ụdị paspọtụ ma ọ bụ ikike ịnya ụgbọ ala, ụgwọ ọnwa, yana ahụmịhe azụmaahịa. Companylọ ọrụ ahụ ga-arụ ọrụ a na ndị ahịa ọ bụla.
Otu ihe a na-agara FCA na CySEC broka. N'ezie, nke a bụ ọkọlọtọ mara mma karịa bọọdụ ahụ. Yabụ, Enweghị onye ahịa ASIC nwere ikikere ga-edebanye aha gị n'enyeghị usoro a. Ọ bụrụ na enyere gị ka ịdebanye aha na brokekọrịta na-enweghị foto NJ, mgbe ahụ nke ahụ kwesịrị ịbụ ọkọlọtọ na-acha ọbara ọbara mgbe ọ bịara izi ezi nke ụlọ ọrụ ahụ.
Ugbu a, ka anyị kwuo na ASIC broker na-enyo onye ahịa enyo. Iji nye gị otu ihe atụ; were ya na onye ahịa na -ewekarị nkwụnye ego nke $ 1k kwa ọnwa. Na mberede, otu ego ahụ malitere itinye ego $ 20ka. Ọ bụ ezie na enwere ike ịnwe ezigbo ihe kpatara ọnye ego dị elu, onye na-ere ahịa ga-ekwupụta ọrụ a na ọchịchị AML / CTF nke Australia.
Ozi zuru ezu zuru ezu
A ga-etinye akụkọ siri ike ruru oke na usoro ụlọ ọrụ nke onye na-ere ahịa. A na-enyocha ndị na-ere ahịa ASIC site na usoro nchịkwa, nke nwere uche - ha niile dị ka ndị nlekọta maka ndị na-etinye ego.
Anyị kwuburu na ọ bụrụ na onye ahịa agbanweela ụzọ ha si etinye ego, a chọrọ ndị na-ere ahịa ASIC ịkọ ya. Agbanyeghị, ọ kwụsịghị ebe ahụ. Na mgbakwunye na nke a, onye na-ere ahịa ga-agabiga usoro nyocha. Nke a gụnyere ịchọpụta ebe e si nweta ego ahụ. Nke a gụnyekwara ịmepụta akụkọ doro anya nke ọma gụnyere nsonaazụ nyocha niile. Nke a bụ ụzọ ọzọ ASIC na-ahazi ma na-egbochi ịchụ ego na mpụ ego.
N'iburu ihe ndị a niile n'uche, ndị na-ere ahịa ASIC kacha mma kwesịrị igosi nghọta doro anya nke imepụta 'profaịlụ ihe egwu ndị ahịa' maka afọ ojuju nke ọrụ nhazi.
Esemokwu nke Njikwa Mmasị
Nke mbu, dika ntuziaka ntuziaka '181', ndị na-ere ahịa ASIC ga-ezere iso ndị ahịa ọ bụla na-emekọrịta ihe ebe enwere ike ịmasị mmasị. Ọ bụrụ na enwere esemokwu, mgbe ahụ, ndị na-ere ahịa ga-eweta ihe akaebe nke njikwa esemokwu.
Site na ịnye usoro njikwa esemokwu n'etiti ụlọ ọrụ ahụ, onye ikikere agaghị emebi ọnọdụ ego ha ma ọ bụ iguzosi ike n'ezi ihe ha. Echiche nke esemokwu esemokwu ego bụ 'ịchịkwa', 'zere', na 'igosipụta' esemokwu ọ bụla nwere mmasị.
ASIC Broker Nchebe
Ọrụ ahụ na-echebe ndị na-etinye ego n'ọtụtụ ụzọ. Nke mbu - ha gha ejide n'aka na onye ahia ASIC obula itukwasiri obi na ego gi bu ihe doro anya ma na aru oru ha n’ime iwu. Nke a na-eme ka ndị na-etinye ego na-atụkwasị obi yana ntụkwasị obi na oghere ego.
ASIC kpebisiri ike ikpuchi ndị ahịa site na ahịa ahịa, yana mmemme agụmakwụkwọ ego dị ka MoneySmart (dịka e kwuru na mbụ) nke na-enyere ndị na-etinye ego aka ijikwa isi obodo ha.
N'ihe banyere ụlọ ọrụ na-ere ahịa na-abanye na mmiri mmiri, ASIC nwere atụmatụ ịkwụ ụgwọ. Nke a na - enyere gị aka ịnweta ego ọ bụla 'furu efu'. N'ezie, ahụ a na-eme onwe ya ma a bịa n'ịkwado ụkpụrụ omume ego.
N'ime ihe nwute na ịkwesịrị ịme mkpesa banyere onye na-ere ahịa ASIC, mgbe ahụ ị ga-enwe ike ịkpọtụrụ ASIC ozugbo. Kọmịshọn ahụ na-enyochakwa akụkọ ọ bụla metụtara mpụ na mpụ. Nke a dị mkpa iji nọgide na-eguzosi ike n'ezi ihe.
ASIC Brokas: Akụ Ahịa
Enwere ụfọdụ nyiwe nke na-enye naanị klaasị ole na ole. Nwere ndị ASIC brokers na-enye ọrụ maka akụ ọ bụla dị n'okpuru anyanwụ. Ka o siri dị, ị kwesịrị ị na-elele mgbe akụ gị họọrọ n'elu ikpo okwu na-akwado tupu ịbanye.
Ka o sina dị, ọ bụrụ na ịmabeghị ụdị akụ ị ga-achọ azụmaahịa, anyị etinyela ndepụta nke ngwa a na-ahụkarị nke ndị na-ere ahịa ASIC kacha mma.
CFD (nkwekọrịta maka ọdịiche)
Ka o siri kwụrụ, a ga - ere CFDs, mana enwere okwu banyere ịgbanwere ohere ịnweta ndị ahịa mgbere n'okpuru ụkpụrụ ASIC. Ihe mgbochi nwere ike ịgụnye mkpuchi ego na iwu ahịa ọhụụ. Mgbe ụfọdụ nyochachara, ndị ọrụ chọpụtara na ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ndị na-ere ahịa azụ ahịa nwere ọnọdụ CFD ha site na ndị na-ere ahịa na-enweghị isi, yana ọnụ ahịa oke ala.
Dika mgbanwe ndia abughi na nkpuru, ma ihe ndia nwere ike iwe otutu otutu oge iji mezuo, anyi gha akowa nkenke ka ndi CFD si aru oru na onye ahia ASIC.
Dị ka ị nwere ike ịma, ndị CFDs na-arụ ọrụ site na ịkọ ọdịnihu ọnụahịa dị iche iche nke ngwa ahịa. Dịka ọmụmaatụ, ị nwere ike ịhọrọ ịkọ nkọ ọnụ ahịa nke ebuka na ụzọ abụọ. Ọ bụrụ n ’ị chere n’ ọnụ ahịa ahịa na - ada ada, ị ga - eresị ma ọ bụ ‘gaa mkpụmkpụ’. Ọ bụrụ n ’ọ dị gị ka ọnụ ahịa ahịa gị ga-abawanye,‘ ị ga-azụta ’ma ọ bụ‘ gafee ogologo ’.
Mgbe ị na-ere ahịa na CFDs, ị gaghị enwe onye nwe ya. Kama nke ahụ, a na-ekenye CFD nsuso ezigbo oge nke ngwa ahụ. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ọnụahịa Nike na-abawanye site na 1.25%, dị ka CFD. N'ụzọ dị oke mkpa, ịzụ ahịa CFDs pụtara na ị nwere ikike ị nweta uru site na 'ịga mkpụmkpụ' na 'na-aga ogologo'.
Na ọtụtụ ndị na-ere ahịa ASIC, ịgaghị akwụ ụgwọ ụgwọ ọrụ ọ bụla na CFDs. Dabere na ikpo okwu, CFDs nwere ike inye gị ohere ịnweta mmiri mmiri Forex ahịa. Ọ bụghị banyere mbak, ọla edo, mmanụ, ndeksi, cryptocurrencies na ọtụtụ ihe ndị ọzọ!
Forex (Ofesi Ofesi)
Ọtụtụ ndị na-ere ahịa azụmaahịa na-elegara ASIC ma ọ bụ FCA anya mgbe ị ga-enweta ikikere. Ma n'ezie, tupu gị onwe gị nwee ike ịzụ ahịa Forex ị ga-enwerịrị onye na-azụ ahịa n'azụ gị. Enweghị onye na-ere ahịa iji nye iwu ahụ maka nnọchite gị, ị gaghị enwe ike ịbanye na ahịa ego ụwa.
E nwere ụzọ atọ nke ụzọ ego abụọ na ha bụ 'exotics', 'umuaka' na 'majors'. Maka ndị na-amaghị, biko chọta n'okpuru ụfọdụ ihe atụ nke ọ bụla:
Curdị Ego Exotic - GBP / ZAR, EUR / TRY, USD / THB, JPY / NOK, AUD / MXN
Orzọ ego Minor - EUR / AUD, EUR / GBP, CHF / JPY, NYZ / JPY, GBP / CAD
Isi ego abụọ - GBP / USD, EUR / USD, USD / JPY, USD / CHF
Iji ASIC ore ahia ahia Forex pụtara na ị nwere ike zụta ma ree ego ụzọ abụọ na pịa nke bọtịnụ. Ahịa ụwa a na-emeghe 24 awa ụbọchị na ụbọchị asaa n'izu, n'akụkụ dị iche iche nke ụwa.
N'ihe gbasara FX, ọ bụrụ na ịchọrọ ịbụ onye na-azụ ahịa aka, anyị na-akwado ịchọrọ maka ikpo okwu na-enye ezigbo akụkọ ego, eserese ọnụahịa, nyocha teknụzụ na ngwa agụmakwụkwọ.
A na-emeghe ahịa ngwa ahịa maka awa iri abụọ na anọ n'ụbọchị, ụbọchị asaa n'izu. Akụ a bara ụzọ atọ - 'ume', 'ọla' na 'ugbo'. Biko chọta n’okpuru ụfọdụ ihe atụ nke ụdị ngwa ahịa ọ bụla.
Ike: mmanụ, mmanụ kpo oku, gas na-enweghị mmanụ, mmanụ gas, mmanụ ụgbọala, na mmanụ ọkụ wdg
Usoro: aluminom, ọlaọcha, palladium, ọlaedo, platinum, na ọla kọpa wdg
Ọrụ ugbo: otis, oka, owu, oka wit, ajị, agwa, osikapa wdg.
Fọdụ ndị ahịa kwenyere na ịnwe ngwaahịa ụfọdụ na pọtụfoliyo gị na-agbakwunye iche iche ma na-ebelata ihe egwu niile.
Ọbụna ndị na-adịghị azụ ahịa otu ụbọchị na ndụ ha anụla banyere ebuka na mbak. N'ezie, ugbu a ọ kachasị mee ya n'ịntanetị. Ikekọrịta ahia na-enye ndị na-etinye ego ohere ịzụta ma ree mbak na ụlọ ọrụ (dịka ọmụmaatụ; British American Tobacco, HSBC, Amazon).
Arịrịọ na ikele 'mgbasa'n'ụdị akụ a gosipụtara ọdịiche dị n'etiti ihe onye na-ere ahịa dị njikere ịnabata iji ree ya, na ihe onye zụrụ ihe dị njikere ịkwụ. Typedị akụ a na - enye gị ohere ọ bụghị naanị ire oke site na LSE (London Stock Exchange), kamakwa tinye ego gị na ụlọ ọrụ ndị dị na mba ofesi.
Ọzọkwa, ọ bụrụ na ịchọghị ịzụta otu akụkụ zuru oke na-ekwu Adidas dịka ọmụmaatụ, ụfọdụ ụlọ ọrụ na-enyere ndị na-etinye ego aka ịzụrụ obere akụkụ nke oke. Enwere ndị na-ahụkarị ASIC na-ahụkarị 3 ma ha bụ ndị a.
Ezi uche: Nke a na ụdị ore ahia ga-azụ ahịa na n'ihi gị ka ị na-adịghị na-eweli mkpịsị aka. Lọ ọrụ ahụ na-arụ ọrụ nke imezu ihe niile ịzụta / ire, n'agbanyeghị, mara na ụgwọ ndị ọzọ a ga-akwụ maka ọrụ ndị ọzọ a rụrụ.
Mgbu: Onye na-egbu egbu na-enye iwu mgbe ị gwara ha ka ha mee ya.
Ndụmọdụ: Ọ bụrụ n'ịchọrọ obere nduzi, mana achọghị ọrụ azụmaahịa na-enweghị atụ, mgbe ahụ onye na-enye ndụmọdụ ndụmọdụ nwere ike ịbụ nhọrọ kacha mma maka gị. Na ore ahia ga-enye gị ndụmọdụ na nke mbak nwere ike ịbụ uru ka ị zụta / ere. Ọzọkwa, ASIC ore ga-eme naanị zụta ma ọ bụ ree ya na ikike gị.
Enwere ụdịrị cryptocurrencies karịrị puku abụọ na ahịa, yabụ na ọ gaghị abụ ihe bara uru ịdepụta ha niile. Site na nke ahụ kwuru, n'okpuru ị ga-ahụ ndepụta nke cryptocurrencies nke a na-ejikarị nyiwe azụmaahịa ASIC.
N'ihe banyere cryptocurrencies, anyị chere na ọ bụ echiche ezi uche iji zuru oke nke akaụntụ ngosi na ebe ASIC broker. Ebe ị gaghị enwe ike iji akaụntụ ngosi na mgbanwe ahụ, ọ bụ ụzọ kachasị mma nke ịme omume tupu ịmalite itinye ego na iji ezigbo ego.
Ndị na-etinye ego na indices na-enweta uru site na ịkọ amụma ziri ezi ngagharị ọnụahịa. Nwere ike ilekwasị anya na otu ndepụta, ma ọ bụ ị nwere ike ịzụ ahịa ọtụtụ. Indices na-egosiputa 'ngbanwe' otutu onu ahia nke edeputara na mgbanwe di iche. Dịka ọmụmaatụ, FTSE 100 na-anọchite anya ụlọ ọrụ 100 kachasị na London Stock Exchange.
Mgbanwe na ọnụahịa na ndeksi bụ tụọ na isi na na-akpali na isi. N'adịghị ka akụ ndị ọzọ dị na listi anyị, ịnweghị ike itinye ego na ndenye aha. Kama, ekwesịrị ime ya site n'aka ndị na-ere ASIC na-enye CFDs, Futures ma ọ bụ ETFs.
Họrọ onye ahia ASIC
Nzọụkwụ mbụ ịchọta ezigbo onye na-ere ahịa na-achọta nke na-ejide ikikere site na ọrụ nchịkwa a na-akwanyere ùgwù dịka ASIC. Nyiwe nke Brokas na-egosiputa ikikere ya ka i ghaghi igwu otutu ihe iji choputa onye na ahazi ulo oru.
Site na ịtụkwasị obi na ego siri ike gị na ndị na - ere ahịa na - achịkwa na ị maara na ego gị nọ na nchekwa ma ewezuga ụlọ ọrụ na nkewa ego. Ọzọkwa, ị nwere udo nke uche na ụlọ ọrụ ga-agbaso iwu siri ike iji nye ọrụ ya.
Enwere ọtụtụ ndị na-ere ahịa ASIC na oghere ịntanetị, yabụ ọ nwere ike ịbụ usoro na-akụda ịchọta ezigbo. N'iburu nke ahụ n'uche, anyị etinyela ndepụta nke ịtụle mgbe ị na-eme nyocha nke onwe gị nke ASIC.
Mgbe a bịara n'inweta uru ịzụ ahịa dị mma, mgbasa na-eme nnukwu ọdịiche. Na nkenke, nke a bụ ọdịiche dị n'etiti ịzụta na ire ọnụahịa nke ihe onwunwe, ebe ọ bụ na a na-egosipụta ya site na iji 'pips'.
Ka anyi kwuo na GPB / USD na-agbanwe ego nwere 6 pips. Iji nweta uru, ị ga-etolite itinye ego gị karịa 6 pips.
Lọrụ ga-akwụ ụgwọ
Nke a bụ echiche ọzọ mgbe ị na-ahọrọ ezigbo broka ASIC, mana ọzọ ụlọ ọrụ ọ bụla ga-adị iche. Platformsfọdụ nyiwe nke ndị na-ere ahịa anaghị akwụ ụgwọ ụgwọ ụgwọ ọ bụla kama ha ga-enweta ego site na mgbasa. Ndị ọzọ nwere ike ịgba gị ụgwọ ọ bụla maka ịzụta ma ọ bụ ire ọ bụla. Ego a kwesiri igosi gi mgbe nile dika onye ahia.
Dị ka ihe atụ, cheedị banyere ihe atụ a:
I kpebiri itinye ego £ 2,000
The ASIC ore ga-£ 12 na ụgwọ maka ahia
Ngwá ọrụ teknụzụ na-adịgasị iche iche site na saịtị gaa na saịtị, mana iji nye gị echiche nke ihe ị kwesịrị ile anya maka anyị edepụtara ihe ndị kachasị baa uru nke ndị na-ere ahịa ASIC na-enye.
Nkezi usoro ndozi (ADX)
Nkezi na-agagharị (MA)
Igwe ojii Ichimoku
Onu ogugu na-adaba (EMA)
Akụkụ nke ịghọ onye ahịa bara uru bụ ijikọ ngwaọrụ ndị a na njikwa ego na nnukwu atụmatụ. Ọzọ ngosi ngosi ndị bara oké uru mgbe ịchọta ụkwụ gị na teknuzu egosi dị ka ndị ahụ e kwuru na mbụ.
Ihe ntanetị kacha mma maka azụmaahịa na-enye ma ozi ahịa dị ndụ na data akụkọ ihe mere eme nye ndị ahịa. Maka ndị na-achụ ego, ịmụ akwụkwọ mmegharị akụkọ ihe mere eme nwere ike inye aka n'ezie ma a bịa n'ịkọ ọdịnihu.
Ihe kpatara ya bụ, usoro ndị a na-eme ugboro ugboro, yabụ nyocha na inyocha ngwa ọrụ azụmaahịa ndị ekwuru na mbụ bara uru maka ịkọwa usoro ahịa.
Ọzọkwa, ọ bụrụ na ịchọrọ ịnwale usoro ịzụ ahịa akpaaka na-ejide n'aka na onye na-ere ahịa gị na-akwado ngwanrọ nke atọ MT4. Ihe ọzọ dị mkpa mgbe ị na-ahọrọ onye na-ere ahịa ASIC bụ etu esi egbu iwu ozugbo. Dabere na ụdị akaụntụ ị mepee, iwu gị nwere ike gbue dị ka milliseconds. Nke a nwere ike inwe nnukwu mmetụta na atụmatụ itinye ego gị.
Nhọrọ nke Akụ
Tupu ịga n'ihu ma debanye aha maka onye na-ere ahịa ASIC, ọ ga-adị mma ka ị nyochaa ikpo okwu ahụ site na ịchọpụta akụ ndị dị. Ihe ị masịrị ịzụ ahịa ugbu a nwere ike gbanwee n'ihu. Yabụ ọ bụrụ n'ịchọrọ ịgbasa pọtụfoliyo itinye ego na ya ma emechaa mara na ọ dị mma ịmara na ịnwere klaasị klaasị ole na ole ịhọrọ.
Ọ bụrụ na ọ bụ Forex na ị na-elekwasị anya, wee hụ na ị na-eme ka onwe gị mara nke ego ụzọ abụọ ga-abụ maka na ị na-ahia. Dị ka ọmụmaatụ, ebe ụfọdụ nyiwe nyiwe na-enye ụmụntakịrị, ndị isi na ndị ọkachamara - ụfọdụ na-elekwasị anya na obere aka abụọ.
Imirikiti ndị na-azụ ahịa azụmaahịa ga-agwa gị na ndị na-ere ahịa ASIC kachasị mma bụ ndị nwere ọtụtụ klaasị akụnụba dịnụ, na mmemme ịchọrọ ịmechaa pọtụfoliyo gị.
Nkwado ndị ahịa bụ ihe dị mkpa mgbe ị na-ahọrọ ezigbo ụlọ ọrụ na-ere ahịa. Ọnọdụ dị mma bụ na brokerage dị 24/7 yana nkwado ma ọ bụrụ na mgbe ịchọrọ ya.
Dịka ọmụmaatụ, na ahịa dị ka ngwaahịa na ahịa na-emeghe 24/7, ọ ga-abụ ntakịrị nro ma ọ bụrụ na ịchọrọ enyemaka na mgbede Satọdee ma ọ nweghị onye gbara gị gburugburu iji nyere gị aka ma ọ bụ nye gị ndụmọdụ.
Ndị ASIC kacha mma na-enye ọtụtụ nhọrọ kọntaktị dịka 24/7 nkata ndụ, email, nkwado ekwentị na ụdị kọntaktị.
Onye ahia ASIC ọ bụla dị iche na ngalaba nkwụnye ego / ndọrọ ego. Ebe ụfọdụ nwere ike ịnakwere imirikiti ụzọ ịkwụ ụgwọ, ụfọdụ nwere ike ịnabata nnyefe ọdịnala ọdịnala.
Ọ bụrụ n’inwere usoro ịkwụ ụgwọ n’uche ịchọrọ iji, ị kwesịrị ịlele na ụlọ ọrụ ahụ nabatara ya. Nhọrọ ịkwụ ụgwọ ndị a na-ahụkarị bụ kaadị akwụmụgwọ / debit, nnyefe ụlọ akụ, na e-wallets dị ka Netteller, PayPal na Skrill.
Usoro nkwụnye ego / ndọrọ ego
N’echiche na ị chọtala ụlọ ọrụ na-anabata usoro ịkwụ ụgwọ gị, ị kwesịrị ileba anya ugbua na usoro ọzọ ndị ọzọ. Dịka ọmụmaatụ, lelee iji hụ ma onye na-ere ahịa na-akwụ ụgwọ ego ọ bụla.
Ọzọkwa, ikwesiri ileba anya na ndọrọ ego nke ikpo okwu. Ebumnuche, onye na-ere ASIC ga-ahazi arịrịọ iwepu n'ime ụbọchị ọrụ 2, ọ bụrụ na ọ bụghị ngwa ngwa. Nke a kwụgidere na usoro ịkwụ ụgwọ ị na-eji.
N'ihe banyere akaụntụ, ọ bụ ọrịa strok dị iche iche maka ndị dị iche iche. Onwere ihe omuma ahia di iche nke di na nke obula, na uzo obula di iche iche di iche na ihe ha gha enye.
Y’oburu n’inwe onye ahia nke bu onye na eso uzo nke okpukperechi Islam, mgbe ahu I gha acho inweta onye ahia ASIC nke n’enye Akaụntụ Islam. A ga-emegharị akaụntụ a iji mee ka ndị ahịa nwee ike ikwenye n'okpukpe ha na Iwu Sharia (nke gbochiri inye na ịnata ọmụrụ nwa).
Ọ bụrụ na ndị na-ere azụmaahịa anaghị akpọsa ngwa ahịa islam gbasara, ọ ka nwere ike ịkpọtụrụ ikpo okwu. Ihe kpatara ya bụ na ụfọdụ ndị na-ere ahịa ASIC ga-adị njikere imeghari akụkọ ọkọlọtọ iji gboo mkpa gị.
Ihe ndekọ ego mara nke ọma n'etiti ndị na-etinye ego, mana maka ndị mbido ma ọ bụ ndị ahịa na-achọghị itinye nnukwu ego, enwere akaụntụ 'Nano', 'Micro', na 'Mini'. Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịnwale ụdị azụmaahịa a, wee kpọtụrụ onye na-ere ahịa ASIC ị nwere mmasị na ya - ha nwere ike ịmegharị akaụntụ ọkọlọtọ iji nabata gị.
Etu ị ga-esi banye na ASIC Broker Taa
Site na nke a, ị ga-enwe nghọta miri emi karị ọ bụghị naanị otu ASIC si echebe gị dị ka onye na-azụ ahịa, kamakwa ihe ị ga-ele anya mgbe ị na-ahọrọ ikpo okwu. Ọ bụrụ n’inwebeghị onye na-eweta ọrụ dabara adaba, mgbe ahụ ị ga - ahụ ndepụta anyị nke ndị kacha mma ASIC nke 2021 gaa n’ihu na ibe a.
Iji bido ịmalite, anyị ejirila usoro ị ga - eji debanye aha na saịtị azụmaahịa ASIC taa!
Nzọụkwụ 1: Nbanye
Izizi, ikwesiri ịgafe na weebụsaịtị nke onye ahịa ASIC ị họọrọ. Chọọ maka 'ịbanye' bọtịnụ / njikọ.
Ọzọ, ị ga-abanye adreesị ozi-e gị ma mepụta paswọọdụ nke ị bụ naanị.
Nzọụkwụ 2: Chọpụta / Mara Onye Ahịa Gị (KYC)
Dika anyi kowara na mbu dika iwu na usoro ASIC - ndi choro choro iwu ka ha nweta ihe omuma nke onye obula.
Brokelọ ọrụ a ga-achọkwa akwụkwọ ikike ngafe gị ma ọ bụ ikike ịnya ụgbọ ala, yana ụgwọ ọrụ gọọmentị na aha gị na adreesị gị (nke kachasị - ụgwọ ọrụ sitere na ọnwa 3 gara aga ga-ezu). Akụkụ ọzọ dị ukwuu nke KYC bụ mkpa ịghọta ego gị na-enweta kwa ọnwa, ụgwọ ọnwa na akụkọ ntolite nkenke.
Kwụpụ 3: Nkwụnye Somefọdụ Ego
A ga - agwa gị ka itinye ego ụfọdụ.
Nhọrọ ịkwụ ụgwọ dị na nyiwe ASIC na-abụkarị dị ka ndị a:
E-wallets dị ka Skrill na Neteller
Dị ka anyị kpuchie na mbụ, ọ dị mkpa ịlele nnweta usoro ịkwụ ụgwọ ị họọrọ tupu ị debanye aha.
Ozugbo edozi ego gị, ị ga-adị mma ịga. Y’oburu n’inweghi obi ike iji zụọ ahịa na ego nke aka gị, ọ bụ ezigbo echiche iji akaụntụ ngosi. Ndị na-ere ahịa ASIC na-enyekarị ebe ọ bụla n'etiti $ 10,000 na $ 100,000 na ego ngosi.
ASIC kacha mma nke 2021
N'oge a, anyị ekpuchila ihe niile dị mkpa ị ga-ele anya mgbe ị na-ahọrọ ezigbo ASIC broker maka mkpa gị.
Biko chọta ole na ole n’ime ndị na-ere ahịa ASIC kachasị mma edepụtara n’okpuru maka iji nlezianya tụlee ya, ha niile nwere ikikere zuru oke nke mgbasa ozi nyere.
1. eToro - Aha a na-ewu ewu n'usoro azụmaahịa
A na-asọpụrụ eToro ma a bịa n'ịzụ ahịa mmekọrịta mmadụ na ibe ya, na-enye ndị ahịa ihe dịka 2,000 akụ dị iche iche site na mba ụwa na UK ahịa. eToro na-enye cryptocurrencies, CFDs, ebuka na ndị ọzọ. Newbie na ahụmahụ ahịa ndị chọrọ a n'ezinụlọ ego lobe na 'oyiri ahia' atụmatụ awa site n'elu ikpo okwu. Ihe ruru $ 200 ị nwere ike i copyomi pọtụfoliyo nke onye ahịa na-aga nke ọma. Ọ bụ ụzọ dị mma iji gbanwee pọtụfoliyo gị, na-enweghị ibuli mkpịsị aka.
Enweghị ọrụ gafee osisi na eToro na ETFs na equities na-agbasa asọmpi n'ezie. N'oge a na-ede ihe, e nwere ihe karịrị 16 cryptocurrencies dị na eToro maka ahia 24/7. A na-achịkwa usoro ikpo okwu a ọ bụghị naanị ASIC kamakwa FCA na CySEC. Ebe nrụọrụ ahụ na-akwụ $ 5 ụgwọ maka iwepụ na ikpo okwu na-eji USD. Dịka, enwere ego ntụgharị nke 0.5% iji tụlee
3. Avatrade - Ọtụtụ Ngwongwo Tradable
AvaTrade bụ onye ọzọ ASIC na-ere ahịa na ndepụta anyị ma na-arụ ọrụ kemgbe 2006. companylọ ọrụ ahụ na-achọ ịdọta ndị na-etinye ego na ọkwa niile nke ahụmịhe. Uzo a nwere ihe karịrị ndị ahịa 200,000 na akwụkwọ ya na ndị na-etinye ego na-egbu ihe ruru nde 2 site na saịtị ahụ kwa ọnwa.
Onye na-ere ahia ASIC a na-akwado ụdị nyiwe ndị ọzọ, dịka MetaTrader4 / 5, Onye na-ere ahịa enyo, na ZuluTrade. Iji malite ịzụ ahịa na AvaTrade ị chọrọ ịkwụnye $ 100. Akụ ndị a na-ere ahịa gụnyere cryptocurrencies, bonds, shares, ETFs, indices, and commodities - niile n'ụdị CFDs
N'ihe banyere mbu, AvaTrade ejirila ihe ngosi na 1: 20 maka umuaka na 1:30 maka ndi isi. Nnukwu okpu Indices na ọla edo nwere oke na 1:20. Onu ogugu di na 1: 5 na cryptocurrencies na 1: 2.
Enwere ihe karịrị ego iri abụọ na 50 na-enye na Avatrade - yana Bitcoin, Bitcoin Cash, Litecoin, Bitcoin Gold, Ripple, EOS, Dash, na Ethereum. Brolọ ọrụ a nwere ụlọ ọrụ 11 gburugburu ụwa ma jide ikikere site na ASIC, FSP (South Africa), IIROC (Canada), na FSA (Japan), yabụ ị nwere ike ijide n'aka na ọ bụ onye a na-akwanyere ùgwù na n'okpuru nlekọta siri ike site na ahụ dị iche iche.
Akaụntụ ngosi dị
Na-enwe ikikere site n'ọtụtụ akwụkwọ ikike
$ 100 nkwụnye ego kacha nta
Usoro nkwụsị nwayọ nwayọ ma e jiri ya tụnyere ndị ọzọ
4. FXCM - ASIC Broker Na MT4
FXCM bụ onye na-ere ahịa nke anọwo ihe karịrị afọ 10, na-enye CFDs na Forex. Firmlọ ọrụ ahụ nwere ụgwọ ịzụ ahịa dị ala, ọ na-ewe n'etiti 1 na ụbọchị 3 iji mepee akaụntụ wee bido.
Onye na-ere ahia a nwere ikikere sitere na ASIC yana FCA - ya mere 100% na-achịkwa ma nwee ntụkwasị obi. Enwere otutu ụzọ abụọ dị na azụmaahịa na akụ CFD ndị ọzọ dịka ngwaahịa na ebuka.
Ebe ọ bụ na enweghị nkwụghachi ụgwọ, ị ga-akwụ ụgwọ arụmọrụ na-efu nke $ 50 ma ọ bụrụ na ịnọghị otu afọ.
Feesgwọ azụmahịa asọmpi
Ego iwepu ego efu
$ 50 incativity ụgwọ
Gaa Leta FXCM Ugbu a
5. IG -Super uko na-agbasa
ASIC a na-enye ọma ahịa 17,000 CFD, yana ihe karịrị 10,000 mbak na ETF. Ego kọmịshọn dabere na ụdị ahịa ịchọrọ itinye ego na ya. Iji ma atụ, mgbe a bịara n'ihe nha nhatanha, IG na-ebo flat 8 ọnụego. Ikwesiri ime ahia 3 na otu onwa, onu ogugu a gbadara ruo £ 3. N'aka nke ọzọ, akụrụngwa azụmaahịa CFD niile enweghị ụgwọ ọrụ, ewezuga ebuka.
Nkwụnye ego kacha nta dị n'elu ikpo okwu a bụ and 250 ma ụlọ ọrụ ahụ na-enye ndị ahịa akaụntụ ngosi efu. IG dị na LSE ma nye ohere nke ọtụtụ ahịa n'oge niile n'ụbọchị. Nke a Broka na-enyekwa ndị ahịa gbasaa ịkụ nzọ.
Free ngosi akaụntụ mgbe ịbanye
Ihe kariri otu aru bu ihe kwesiri ekwesi ma mekwaa ya
Ahịa nkwado bụghị gosiri nke ọma
Obere nkwụnye ego £ 250 nwere ike ịdị elu maka ndị mbido
Site na nyocha ịntanetị dị mfe, ị ga-ahụ na e nwere tọn nke nyiwe nke na-ekwe nkwa inye ndị ọrụ ego nnukwu ọrụ. Nsogbu nke oke nhọrọ bu ichikota oka site na igbogbo ya. Ebe mbụ ịmalite bụ ijide n'aka na onye na-ere ahịa nwere ikikere zuru oke ma dezie ya site na ụlọ ọrụ ikikere ịkwanyere ugwu dịka ASIC, FCA ma ọ bụ CySEC.
Nke a bụ naanị ụzọ iji mara na echedoro ego gị yana na ị naghị eso ụlọ ọrụ rogue eme ihe. Ndụmọdụ ọzọ mgbe ị na-ahọrọ onye na-ere ahịa bụ ime ihe omume ụlọ akwụkwọ gị maka usoro ọrụ, mwepu na nkwụnye ego na-akwụ ụgwọ ma gbasaa.
Dịka anyị kwuworo, akụkọ ngosi bụ ụzọ dị mma iji chọta ụkwụ gị n'ọnọdụ ọnọdụ ibi ndụ na-enweghị imefu ezigbo ego gị. Ha bụkwa ụzọ dị mma nke ịnwale usoro ọhụụ.
Kedu ihe bụ ASIC broker?
Onye ASIC broker bụ onye na-ere ahịa nke nwere ikikere site n'aka ASIC (Australian Securities and Investments Commission). Nke a pụtara na onye na-ere ahia ga-agbaso iwu na ụkpụrụ maka ahịa azụmaahịa zuru oke maka mmadụ niile.
Enwere m ike iji leverage na ASIC broker?
Eeh. Imirikiti ndị na-ere ahịa ASIC ị nwere ike iji leverage, mana mara na enwere ike itinye oke gị.
Kedu akụ m nwere ike iji azụmaahịa ASIC zụọ ahịa?
Kedu akụ dị na-adabere na ASIC broker ị họọrọ. Fọdụ ndị na-ere ahịa na-elekwasị anya na klas akụ na ụba ole na ole ebe ndị ọzọ nwere ike ịnye ihe niile n'okpuru anyanwụ. Yabụ lelee ozi a mgbe niile tupu iweba gị.
Kedu ihe kpatara m ga-eji zipu akwụkwọ nke ID m na ụlọ ọrụ ASIC?
Azịza ya dị nkenke - ọ bụ iwu. Dịka ASIC 'Mara Onye Ahịa Gị', ndị na-ere ahịa ahịa niile ga-amata ndị ahịa ọ bụla na-eji echiche foto na nlele.